EVY's Kitchen: September 2014
ဒီတစ်ခါလုပ်ပြမယ့်မုန့်ကတော့ ရှိပြီးသားမုန့်ကို ထပ်ပြီးအရသာရှိအောင် မွန်းမံပြင်ဆင်ထားတဲ့ မုန့်တစ်ခုပါ။ သာမန် Croissant ကို almond paste သုံးပြီးပြန်လုပ်ထားတာကြောင့် almond အရာသာနဲ့ မုန့်ရဲ့ အဆိမ့်အရသာ ၂ မျိုးပေါင်းကာ စားလို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့များ Croissant ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ almond paste ကိုအထဲမှာထည့်ခြင်းအားဖြင့် အရသာကို ပိုပြီးကောင်းမွန်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီမုန့်အတွက်ကတော့ အသင့်ရောင်းတဲ့ Croissant များကိုသာသုံးထားပါတယ်။
Croissant - ၄ခု
Almond Paste အတွက်
Almond အမှုန့် ၈၀ ဂရမ်
· ရလာသော almond paste ကို အသင့်ပြင်ထားသော မုန့်များပေါ်သို့ ပုံပါအတိုင်းလောင်းချပါ။
· ထို့နောက် ၁၇၀ ဒီဂရီအပူပေးထားသော Oven မှာ ၁၈ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပေးပါ။
· ဒါဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အရသာရှိတဲ့ Almond Croissant အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Posted by Evy at 2:33 PM 1 comment:
Mini Almond Tart
ဒီမုန့်လေးကတော့ အရင်ကလည်း လုပ်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အရင်ကတော့ မုန့်ဗန်း အကြီးကို သုံးပြီးလုပ်ပြတာပါ။ ခုတစ်ခါတော့ တစ်ယောက်စာ အသေးလေးတွေ လုပ်ချင်တဲ့သူများအတွက် အိုင်ဒီယာနောက်တစ်မျိုးရအောင် ခွက်အသေးလေးတွေသုံးပြီး လုပ်ပြပေးထားပါတယ်။ မုန့်အသေးလေးတွေကတော့ လှီးဖြတ်စရာမလိုပဲ တစ်ယောက်စာအနေတော်လေးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်ခံမယ်ဆိုရင် တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ အရင်တုန်းက မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အသစ်အဆန်းပေါ့။ ဒီမုန့်က စားလို့သိပ်ကောင်းသလို အပြင်မှာလည်းရှာတွေ့ဖို့ ခက်တဲ့ မုန့်ပါ။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ သိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်စမ်းလုပ်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်။
မုန့် အသေး ၁၃ ခုစာ
လှော်ထားသော Almond meal၂၀ ဂရမ် ( အဲဒါကို အလွယ်တကူရှာမရဘူးဆိုရင် ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ လှော်ပြီးသား almond အစေ့ကိုဝယ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထောင်းပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်၊ )
နောက် ဂျုံလုံးကို ဒလိမ့်တုန်းနဲ့လှိမ့်ပြား ပြီး ၂ လက်မ အချင်းခန့် အ၀ိုင်းလေးတွေ လှီးဖြတ်ပေးပါ။ ပြီးမှ မုန့်ဖုတ်မယ့်ခွက်လေးတွေထဲမှာ ထည့် ခက်ရင်းလေးတွေနဲ့ ထိုးပေးပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီ oven မှာ ၆ မိနစ်လောက်ဖုတ်ပေးပါ။ပြီးရင်oven ထဲကထုတ်ပြီး အအေးခံထားပေးပါ။
ထောပတ် ၁၀၀ ဂရမ်
ဂျုံ ၂၀ ဂရမ်
Almond meal ၁၆၀ ဂရမ်
ခေါက်ထားသော ကြက်ဥ ၂လုံး
· ပြီးရင် ခုနက ဖုတ်ပြီးသား မုန့်အောက်ခံများ ပေါ်မှာဖြည့်ပြီး Almond flake ဖြူးကာ ၁၇၀ degree oven မှာ မိနစ် ၂၀ခန့်ဖုတ်ပေးရင်ရပါပြီ။
Posted by Evy at 11:04 AM 1 comment:
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ၀ါဂွမ်းလို နူးညံ့တဲ့ ချိစ်ကိတ် လုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ အရသာဆိမ့်လှတဲ့ ချိစ်ကိတ်ပါ။ ပုံမှန်ချိစ်ကိတ်ကို အီလိုမကြိုက်ရင် ဒါမျိုးလေး လုပ်စားရင်တောင် အကြိုက်တွေ့ကြမှာပါ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၈လက်မ ကိတ်မုန့်တစ်ခုစာ)
သကြား - ၇၀ ၈ရမ်
ကြက်ဥအနှစ် - ၃ ခု
ကြက်ဥအကာ - ၃ ခု
လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ပုံတစ်ပုံစာ cream of tar tar (မရှိလျှင် လီမွန်ရည်နဲ့ အစားထိုးပါ)
ထောပတ် ၂၅ ဂရမ်
ခရင်မ်ချိစ် - ၁၂၅ ဂရမ်
နွားနို့ ၅၀ ဂရမ်
ကိတ်ဂျုံ (ဂျုံအနုစား) - ၃၀ ဂ၇မ်
ပြောင်းကော်မှုန့် ( corn flour) ၁၀ ဂရမ်
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ ပုံတစ်ပုံ
1. ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ခရင်မ်ချိစ်၊ ထောပတ် နဲ့ နို့ကို ရေငွေ့နဲ့ အပူပေးပြီး ပျော်အောင်လုပ်ထားပါ။ ပြီးမှ လုံးဝအေးအောင် အအေးခံပါ။
2. အေးသွားရင် ဂျုံ၊ ပြောင်းကော်မှုန့်၊ ဆား၊ ကြက်ဥအနှစ်ကို သမအောင်ရောမွှေထည့်ပေးပါ။
3. နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ကြက်ဥအကာ နဲ့ cream of tar tar ကိုရောကာ အမြုပ်ထအောင် မွှေပါ။ ဒီအဆင့်က အရေးအကြီးဆုံးပါ ဒီအဆင့်မှာ ကြက်ဥအကာပျက်တာနဲ့ မုန့်ပျက်မှာပါ။ တစ်ချို့တွေ မုန့်သားကျစ်ကျစ်ကြီးတွေ ထွက်လာတာ ဒီအဆင့်မအောင်မြင်လို့ပါ။ အမြုပ်ထလာတာနဲ့ သကြားကို ထည့်ကာ soft peak ရောက်အောင်မွှေပါ။ မုန့်သားစေးပျစ်လာအောင် မွှေရပါမယ်။ ပုံမှပြထားပေးပါတယ်
4. နောက်မှ ခုနက ရောထားတဲ့ ခရင်မ်ချိစ်၊ဂျုံအရောကို သမအောင် ရောမွှေပေးပါ။
5. ဆီစိမ်စက္ကူခင်းထားတဲ့ ၈လက်မဗန်းထဲကို ထည့်ကာ ၁၆၀ ဒီဂရီအပူပေးထားသော အာဗန်မှာ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်ဖုတ်ပေးပါ
6. လုံးဝအေးမှ သုံးဆောင်ပါ။
Posted by Evy at 8:50 PM2comments: